लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन किन ?
जनतापाटी शुक्रबार, साउन ३, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संविधानको मर्म विपरित विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहले पठाएको विवरण अुनसार आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनको परीक्षा साउन ४ गते शनिबारबाट हुँदैछ । यता आदिवासी जनजाती महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरु आयोगको विज्ञापनमा समावेशी र संविधान बमोजिम नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
विज्ञापन अस्वीकार्य भनेर निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ? के हुन मागहरु ?
संविधानले समानुपातिक र समावेसी आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेशी पीछिडिएको क्षेत्रहरुको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आरक्षण मार्फत गरेको छ ।
त्यही व्यवस्था अनुसार अहिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन निकालेको छ । त्यो विज्ञापनमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । त्यहि हुनुपर्छ भनेर हामीले आनदोलन सुरु गरेका हौं ।
संसदीय समितिले निर्देशन दिए पश्चात सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई विज्ञापन नरोक्नु भनेको छ । अब कुरा कसरी मिल्छ ?
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन जति जुन रेसियोमा गर्नुपर्ने थियो त्यो रेसियो बिग्रेछ । त्यसकारण त्यो बिग्रेको रेसियोलाई करेक्सन गरायो भने त कुरा मिल्यो नी । त्यसमा अरु कुनै वार्ता, सहमति गर्नुपर्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । कानुन अनुसार ४५ प्रतिशत आरक्षणा कोटा छुट्याउँदै हिसाब मिलायो भने कुरा त टुंगिहाल्छ नी ।
ग¥यो भने सम्भव हुन्छ । शासकहरुले चाहाने हो भने कुनै पनि समयमा काम बन्छ । तर यहाँ सरकारको चरित्रनै आरक्षणका हिसाबमा भनेजस्तो छैन । मान्छेको मनस्थिति नै खराब भयो भने कसको के लाग्छ ।
४ गते परीक्षा हुदैछ अब तपाइहरुको आनदोलन के हुन्छ ?
हामीले आन्दोलनका कार्याक्रमहरु घोषणा गरिसकेका छौँ । हामीले बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने भनेका थियौँ तर यहि समयमा प्राकृतिक विपत्ति आएपछि त्यो नहुने भएको छ । तर प्रदेश नम्बर १ मा भने शनिबार बन्द हुनेछ । सरकार राहत र उद्धारमा लागेको हुनाले बन्दको कार्यक्रमम स्थागित भएको छ । तर हामीले लोकसेवा कार्यालयहरुमा धर्ना दिने, परीक्षा केन्द्रहरुमा डिस्टविङ गर्ने गरिराखेका छौँ ।
परीक्षा सञ्चालन त हामीले हुन दिँदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन कुनै व्यक्ति नेता मन्त्री बन्नका लागि होइन् यो हामीले गरेको आनदोलन आफ्नै लागि हो आफ्नै सन्ततीका लागि हो । जुन १ लाखले आरक्षणकोटमा निवदेन दिनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले भनेका छौँ । यदि सरकारले संविधनअनुसारको कोटा निर्धारण ग¥यो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुने हो । तपाईहरु पनि यसमा समर्थन गर्नुहोस् भनेका छौँ ।
तपाईहरुको आन्दोलन पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने छ । यसको मतलव के ?
राज्य समावेशी हुनुप¥यो । राज्यका संरचनामा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । आन्दोलनका क्रममा पहिचानको मुद्धा उठ्नु स्वभाविक हो, किन भने हामी नेपालका आदिवासी जनजातीहरुले लामो समयदेखि पहिचानको वकालत गरिरहेका छौँ । रज्यको संरचना हुदा आदिवासी जनताको पहिचानको संबोधन हुनका लागि पुनसंरचना हुनुपर्छ भनिरहेको मागहरुले अहिले निरन्तरता मात्रै पाएको हो ।
पहिचानका कुरा गर्दा हाम्रो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश महिला हुनुहुन्थ्यो । राज्यका अन्य क्षेत्रमा पनि अहिले समावेशी प्रतिनिधित्व त छ नी ?
होइन् एक जना राष्ट्रपति हुँदैमा वा केही व्यक्तिले अवसर पाउँदैनमा सबै आदिवासी जनजातीको मुद्धा सम्बोधन भयो भन्न मिलेन । त्यस कारण एक दुई जना व्यत्तिःहरुलाई हेरेर यो कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो भनाई समग्रतामा हुनुप¥यो ।
८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बि भएको देश धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भने तपाईले भने जस्तो राज्यका संरचनाहरु पहिचानको आधारमा सम्भव होला र ?
यस सन्दर्भमा पहिले त जनगणना गर्दा नै गल्ति भएको छ । अहिले हेर्ने हो भने कति बुद्धिष्ट छन् । अहिलेको जनगणनामा नै गल्ति छ । हामीले परिकल्पना गरेको राज्य जातिय राज्य होइन, हामीले परिकल्पना गरेको राज्य पहिचानको हो । त्यो भित्रको संरचना समानुपातिक र समावेशी हुनुप¥यो भन्ने हो । नेवा राज्यको परिकल्पना गर्दा त्यहाँ उनीहरुको मात्रै वर्चस्व हुनुपर्छ भन्ने होइन् । जनसंख्याको अनुपातका आधारमा हुनुपर्छ भनेका हौँ । यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् ।
हामीले आरक्षणका कुरा गर्दै गर्दा दार्चुला र जुम्लामा मधेशी कोटा तथा झापा र कञ्चनपुरमा किन पिछडिएको कोटा आवश्यक छ ?
राज्यले यस्ता कुराहरुमा भ्रम सिर्जना गरेर समानुपाति र समावेशी सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको छ । हामीले पनि बारम्बार भनेका छौँ । झापा मोरङमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राख्न जरुरी छैन् । अवथा डोल्पा हुम्लामा मधेशी कोटा राख्न जरुरी छैन् । हाम्रो कुरा पनि यहि हो । जुन क्षेत्रमा जनसंख्या जस्तो अनुपात छ । त्यो क्षेत्रमा त्यही तरिकाले विज्ञापन आव्हान गर्नुप¥यो । संघले बास्केटमा निकाल्दा त प्रतिशत अनुसारको कोटा हुनै प¥यो । तर सम्बन्धित क्षेत्रले विज्ञापन निकाल्दा त्यो हुनु भएन् ।
कोभिडबाट रसियामा एकै दिन एक हजारको मृत्यु, ५० प्रतिशतले लगाएनन् खोप ५ मिनेट पहिले
सुडान संकटः सेनालाई कु गर्न दुरुत्साहन गर्दै हजारौं मानिस सडकमा २९ मिनेट पहिले
मेलम्ची इन्द्रावती सडक पुनः अवरुद्ध ३७ मिनेट पहिले